Nke 11 Mgbụsị akwụkwọ 2020 - Regwọ Ọrụ --gwọ - Regwọ Ọrụ .gwọ
Home Mba 11 Mgbụsị akwụkwọ 2020
Daalụ! Dịka ihu igwe na-atụ jụụ, anyị nwere ụfọdụ nnukwu ozi ọma na akwụkwọ akụkọ a nwere ihe ndị mara mma iji mee ka obi gị dị ọkụ, yana ụfọdụ ndị gbara ọchịchịrị iji kpalie gị ime ihe ka ukwuu. Anyị sere foto dị na elu na njem ọrụ na Ireland n'oge mgbụsị akwụkwọ ikpeazụ. Ọ na-echeta ọmarịcha rose nke Tralee. All nzaghachi na-anabata gị Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Mwepụta nke atụmatụ nkuzi 7 n'efu
Nnukwu akụkọ! Onyinye wardgwọ isgwọ ahụ nwere obi ụtọ ịkpọsa mwepụta nke 7 isi nkuzi atụmatụ ya na Intanet ornontanetị na Mmekọahụ maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị, n'efu. Enwere UK, American na International Editions dị. Ihe omumu a kwekọrọ na (UK na Scottish) ntuziaka gọọmentị banyere mmekọrịta na agụmakwụkwọ mmekọahụ ma dị njikere maka nkesa. Usoro anyị pụrụ iche na-elekwasị anya n'ụbụrụ nwa. Thelọ ọrụ Royal nke General Practitioners kwadoro ụgwọ Foundationgwọ 4thgwọ ahụ maka afọ nke XNUMX dị ka onye na-enye ọzụzụ a kwadoro na 'ornogba Ọgba na Mmekọahụ'.
Gịnị mere ha ji dị mkpa?
"N'ime ọrụ niile dị na ịntanetị, porn nwere ikike nke ịbụ onye na-eri ahụ, " ka ndị ọkà mmụta banyere akwara ozi bụ́ Dutch na-ekwu Meerkerk et al.
Gịnị mere ha ji enwere onwe ha?
Nke mbu, mbelata ihe ndi mmadu no n’ime iri gara aga putara ulo akwukwo enweghi ego pere mpe maka nkuzi ndi ozo. Nke abuo, oge na-adighi nma na itinye iwu nkwenye afọ (lee akụkọ akụkọ n'okpuru) nke ga-egbochi ụmụaka ịsụ ngọngọ n'ihe okenye, emeghị ka ha nwekwuo ohere ịnweta nnwere onwe, iyi egwu, egwu egwu n'oge ọrịa a na-efe efe. N'ụzọ ahụ ndị kachasị mkpa nwere ike ịnweta ihe ndị nwere onwe ha dabere na nyocha sayensị kachasị ọhụrụ.
Biko nyere anyi aka igbasa ozi banyere ihe nkuzi a. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji nyere anyị aka na ebumnuche gị na onyinye, bọtịnụ inye onyinye ọhụrụ ga-adị n'oge adịghị anya. Lee nkuzi Ebe a. Nwee anya na anyị blog n'elu ha maka iwebata ngwa ngwa.
Nke a bụ ihe dị ụtọ, animated video akpọ, “Gịnị bụ ịhụnanya?” dị ka ihe ncheta maka ihe anyị na-etinye uche na ya na ka obere ihe siri dị mkpa. Anyị ekwesịghị ichefu ihe mgbaru ọsọ a ma lekwasị anya na ihe egwu dị na iji egwu egwu. Uringzụlite ịhụnanya dịkwa mkpa.
Hụnanya na-emetụ aka dị mkpa maka ọdịmma anyị maka na ọ na-eme anyị nchedo, elebara anya na obere mesiri ike. Olee mgbe ikpeazụ metụrụ gị aka? Iji chọpụta ihe ndị ọzọ, BBC mere nyocha a kpọrọ Nnwale Ule n'echiche a dị omimi. Nnyocha ahụ malitere n’agbata Jenụwarị na Machị afọ a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 44,000 keere òkè na mba 112. Enwere usoro nke usoro na ederede gbasara nsonaazụ nke nyocha ahụ. Ndị a bụ isi ihe maka anyị site na ole na ole n'ime ihe ndị e bipụtara:
Okwu ato ndi a na-adibu kọwaa aka bụ: "nkasi obi", "ọkụ" na "ịhụnanya". Ọ bụ ihe ịtụnanya na "nkasi obi" na "ọkụ" so n'ime okwu atọ ndị mmadụ na-ekwukarị na mpaghara ọ bụla nke ụwa.
Ihe kariri ọkara mmadụ chere na ha enweghị ezu aka ná ndụ ha. N'ime nnyocha ahụ, 54% nke ndị mmadụ kwuru na ha nwere ntakịrị ntakịrị ndụ ha na naanị 3% kwuru na ha nwere oke.
Ndị mmadụ na-enwe mmasị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enwekarị ọkwa ọdịmma dị elu yana ogo owu ọmụma. Ọtụtụ nnyocha ndị e mere na mbụ egosipụtakwa na iji aka anyị na-eme ihe dị mma maka anyị na ahụike na nke uche.
Anyị na-eji dị iche iche akwara akwara iji chọpụta ụdị mmetụ dị iche iche.
Pụrụ iche irighiri akwara
“Eriri akwara ngwa ngwa na-aza ma ọ bụrụ na a pịa anyị n’akpụkpọ ahụ ma ọ bụ kpọọ anyị, na-ezipụ ozi n’akụkụ ụbụrụ anyị nke a na-akpọ somatosensory cortex. Ma n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọkà mmụta sayensị bụ Prọfesọ Francis McGlone na-amụ ụdị eriri akwara ọzọ (nke a maara dị ka afụ ụdọ C) nke na-eduzi ozi n'ihe dị ka iri ise nke ọsọ nke ụdị ọzọ. Ha na-enyefe ozi a n’akụkụ dị iche iche nke ụbụrụ a na-akpọ cortex - akụkụ nke na-arụkwa ụtọ na mmetụta. Yabụ kedu ihe kpatara usoro a jiri nwayọ wee mebe ngwa ngwa? Francis McGlone kwenyere na eriri ndị dị nwayọ dị ebe ahụ iji kwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya site n'iji nwayọọ nwayọọ na-ata anụ ahụ ozi. ”
N'aka nke ọzọ, ụdị mmekọahụ jọkarịrị njọ na-abawanye n'etiti ndị na-eto eto. Ọ bụ ihe ụlọ ọrụ porn na ndị ọrụ ya edegharịrị dị ka 'ikuku egwu' ma ọ bụ 'iku ume' nke mere na ọ dị mma ma nwee obi ụtọ. Ọ bụghị. Aha ezigbo ya bụ ọnya nke na-egbu egbu.
Dr Bichard bụ onye nlekọta ahụike na North Wales Brain Injury Service. Ọ na-ekwu maka "ọnya dị iche iche nke ọnya na-adịghị egbu egbu na-akpata nke nwere ike ịgụnye njide obi, ọrịa strok, ime ọpụpụ, afọ ojuju, nsogbu okwu, njide, ahụ mkpọnwụ, na ụdị ndị ọzọ nke ụbụrụ na-egbu oge." Lee nke anyi blog na ya.
Nzukọ Nyochaa Afọ Ọhụrụ June 2020
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata ka anyị ga-esi selata aka ụmụaka na-ekiri ụdị ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ nke na-eme ka ime ihe ike na-adị mma n’anya, i nwere ike inwe mmasị na nke a. Onyinye wardgwọ spentgwọ ahụ ji oge ọkọchị rụọ ọrụ na John Carr, OBE, odeakwụkwọ nke Njikọ Aka'smụaka nke UK na Njikọ Ntanetị, iji mepụta Nzukọ Ọgụgụ Oge nke Afọ mbụ na-akpali agụụ mmekọahụ. O mere ihe karịrị 3-ọkara ụbọchị na June 2020 na ndị nsonye 160 sitere na mba 29. Ndị na-akwado ọdịmma ụmụaka, ndị ọka iwu, ndị gụrụ akwụkwọ, ndị ọrụ gọọmentị, ndị na-amụ gbasara akwara na ụlọ ọrụ teknụzụ niile gara. Lee nke anyi blog n'elu ya. Nke a bụ akụkọ ikpeazụ site na ogbako.
Ndị Nne na Nna Na-eduzi Ịntanetị
Anyị na-agbaso nduzi ndị nne na nna mgbe niile mgbe enwere ozi ọhụụ iji tinye. Ọ jupụtara na ndụmọdụ, vidiyo na ihe ndị ọzọ iji nyere ndị nne na nna aka ịghọta ihe mere egwu taa ji dị iche na porn nke oge gara aga ma si otú a chọọ iche obibia. Enwere weebụsaịtị na akwụkwọ, dịka ọmụmaatụ, iji nyere ndị nne na nna aka iso ụmụ ha na-enwe mkparịta ụka ahụ siri ike.
“Anyị bụ ihe anyị na-eme ugboro ugboro”